Huayna Picchu, पेरू मा खजाना | यात्रा समाचार
Huayna Picchu, पेरू मा खजाना
मारिएला क्यारिल | | पेरू, के हेर्ने
पेरू दक्षिण अमेरिकामा भ्रमण गर्नका लागि यो सब भन्दा चाखलाग्दो देशहरू मध्ये एक हो। यो एक पुरानो संस्कृति र विभिन्न संस्कृतिहरु को खंडहर छ कि शानदार हो। सायद सबै भन्दा राम्रो ज्ञात भग्नावशेषहरू माचू पिचू हुन्, साहसिक कार्य जुन हामी सबै गर्न चाहन्छौं, तर हामी तिनीहरूमा पेरूलाई संक्षिप्त गर्न सक्दैनौं।
को Huayna Picchu को भग्नावशेष तिनीहरू नियमित रूपले पर्यटकलाई राम्रोसँग थाहा नभएको खजाना हुन्, यद्यपि तपाईंले उनीहरूलाई माचू पिचूमा चढाईको बखत आयोजन गर्ने क्रममा सुन्नुहुनेछ। तिनीहरू जान्न लायक छन् किनकि, अन्य प्रसिद्ध प्रख्यातहरू जस्ता, ती भग्नावशेषहरू छन् जुन पर्वतहरूको अग्लो ठाउँमा लुकेका छन्। के तपाई पेरू जानुहुन्छ? त्यसोभए यो जानकारी लेख्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई नबिर्सनुहोस्।
1 Huayna Picchu
2 Huayna Picchu भ्रमण गर्नुहोस्
मूल भाषा, क्वेचुवामा यसको अर्थ हो युवा पहाड। यदि हामी यो हिमाललाई माचू पिचूसँग तुलना गर्यौं भने यो हो सानो पहाड तर के योसँग धेरै स्टीपर, साँघुरो र खतरनाक माथिल्लो मार्ग छ.
हिमाल छ १० मिटर अग्लो र यसको शीर्षमा पुग्न यो माचू पिचू भएर जान आवश्यक छ किनकि त्यहाँ एउटा मैला सडक छ जुन दुबै पर्वतहरूलाई पहिलो दिशाको उत्तरपट्टि जोड्दछ। जब तपाईं भग्नावशेषको क्लासिक पोस्टकार्ड देख्नुहुन्छ पछाडि पछाडिको तर्फ, त्यो हुयेना पिचु हो। केवल सानो मार्गलाई हेरेर यसले तपाईंलाई भर्टिगो प्रदान गर्दछ तर तपाईंले सम्झनु पर्दछ कि Incas जबरदस्त बिल्डर्स थिए र यदि तिनीहरूले पथ बनाए भने यो त्यो बाटो पस्ने छ।
त्यसपछि पहाडलाई चिन्नु भनेको भाग हो पर्वतारोहण भ्रमण तपाईं माचू पिचूको प्रसिद्ध गढीबाट के गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले टिकट किन्नु पर्नेछ र थाहा पाउनु पर्दछ कि माचू पिचूमा चल्ने सबै पछि हुनवा पिचूमा आउँदैनन्। किन? ठिक छ किनभने मार्ग साँघुरो र ठाडो छ र जो भर्टिजबाट पीडितहरूका लागि उपयुक्त छैन। भाग्यले सुरक्षा केबलहरू स्थापना गरिएको छ तर यो अझै चुनौती हो।
संक्षेप मा, Huayna Picchu मा चढाई लगभग ठाडो छ र यो अद्भुत छ, तपाईं यहाँ गर्न सक्नुहुने सबै भन्दा राम्रो पदयात्रा मध्ये एक हो।
Huayna Picchu भ्रमण गर्नुहोस्
हामीले माथि भनेझैं यो विशेष टिकट किन्न आवश्यक छ र त्यहाँ धेरै छैन। मात्र Tickets०० टिकटहरू बिक्री भयो ताकि तपाइँ तपाइँको पुरानो मिति भन्दा छ महिना पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यो हो कि केवल people०० मान्छेहरू प्रति दिन स्वीकार गरिन्छ, त्यसैले यदि तपाइँ उच्च मौसममा जानुहुन्छ यो दिमागमा राख्नुहोस्। जब आयोजनको क्रममा तपाईंले ट्रेनको टिकटहरू, होटेल र यो विशेष रूपमा सबैको साथ सोच्नु पर्छ।
त्यसो भए, पहिले तपाईं माचू पिचूमा पुग्नुपर्नेछ र तपाईं उत्तर तिरको गढीमा पुग्नु भएपछि, तपाईं हुयेरानास वा सेक्रेड रक सेक्टर भएर जानुहुन्छ र त्यहाँ कन्ट्रोल बुथमा जानुहुन्छ जुन पहाडमा प्रवेश नियमन गर्दछ। दुई समूह प्रति दिन प्रविष्टि गर्नुहोस्: एक यो बिहान and देखि7र बिहान १० र ११ बीचमा गर्छ। People०० मानिसहरूलाई अनुमति छ, त्यो हो २०० प्रति पारी।
गणना गर्नुहोस् दुई र आधा घण्टा पैदल माथि र तल तपाईं खर्च गर्नुहुन्छ समय गणना बिना नै। हिंड्न गाह्रो देखि गाह्रो अवस्था हो, किनकि हामीले भनेजस्तै पहाड खडा छ र यद्यपि ढु st्गा र सुरक्षा केबुलमा कुँदिएका सिडाहरू छन्, सत्य यो हो कि यो सजिलो छैन, यदि तपाईले कष्ट भोग्नु भयो भने एक्लै छोड्नुहोस्। भर्टिगो पुरस्कार के हो?
खैर माथि छ चन्द्रमाको मन्दिर, एक प्राकृतिक गुफा भित्र कुँदिएको। यो क्षेत्र को सब भन्दा अविश्वसनीय भूमिगत निर्माणहरु मध्ये एक हो। यो एकल गुफा होईन तर धेरै जसलाई इन्काले प्राकृतिक खण्डमा इम्बेड गरिएको खदानका टुक्राहरू समावेश गर्दछ। भित्ताहरू सजाइएको छ र यो सोच्न सजिलो छ कि यो ठाउँलाई आकार दिन यो सजिलो थिएन। कसैलाई यसको वास्तविक कार्य थाहा छैन किनकि यसको धेरै सजावटहरू लुटिएको छ। लाजमर्दो कुरा
यसैले, त्यो नाम जसद्वारा गुफा चिनिन्छ, चन्द्रमाको मन्दिरयो केहि मनमानी छ र त्यहाँ कुनै पुरातत्वविद् छैन यसको लोकप्रियताको बावजुद यसलाई समर्थन गर्न। अर्कोतर्फ, सडक जसले माचु पिचूलाई Huayna Picchu काँटाहरूसँग जोड्छ र यसको मार्गहरू मध्ये एक मात्र त्यस्तो छ जुन माथि जान्छ जहाँ एक चट्टान भनेर चिनिन्छ। Inca कुर्सी र केहि माचू पिचूको गढी र उरुबाम्बा नदीको अद्भुत दृश्य यसको मंथन पानीको साथ।
फोटोहरूले संकेत गर्दछ कि यो गाह्रो मार्ग हो तर मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईंले यसलाई याद गर्नु हुँदैन किनभने यी सबै माथिबाट Panoramic दृश्य यो केवल अद्भुत छ, यसले तपाईंको सास लैजान्छ। माचु पिचूको भग्नावशेष बारे तपाईं 400०० मिटर माथि हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्।
माथि हामीले भन्यौं कि तपाईंले यस भ्रमण गर्नको लागि विशेष टिकट किन्नुपर्नेछ। पेरुभियन र विदेशीहरूका लागि दरहरू फरक छन्। यस अवस्थामा संयुक्त भ्रमण माची पिचू / हुयेना पिचूको लागि प्रति विदेशी वयस्क २०० तौलको लागत छ (करीव २०० यूरो), र १२ foreign तौल प्रति विदेशी विद्यार्थी (200 125 यूरो)। यी मुल्यहरू भ्रमणको सबैभन्दा महँगो छ किनकि यदि तपाईं माचू पिचू, संग्रहालय वा हिमालमा मात्र जानुहुन्छ भने, दरहरू १ 33२ र १152les तलका हुन्छन्।
यहाँ पर्वतारोहण गर्दा, आरामदायक जुत्ता, सनस्क्रीन, सनग्लास, टोपी वा टोपी, एक प्रकाश कोट जसले वर्षा र पानीलाई भगाउँदछन् भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। Huayna Picchu भ्रमण गर्न को लागी वर्ष को समय हो? खैर, मे र अक्टुबर बीचमा किनकि नोभेम्बर र मार्चको बीचमा यो वर्षाको मौसम हो र पानीको अस्वस्थता पहिरोको खतराले जोड दिएको छ जुन दुर्भाग्यवस धेरै पटक हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » पेरू » Huayna Picchu, पेरू मा खजाना
क्रेट टापुमा के हेर्ने
सबैभन्दा उपयुक्त यात्रा बीमा कसरी छनौट गर्ने?